USantiago Posteguillo, utyhila iyelenqe likaYo, uJulia. | Uncwadi lwangoku
UAna Lena Rivera Muñiz | | Ezahlukeneyo
USantiago Posteguillo, ophumelele amabhaso ePlaneta ka-2018 ngenoveli yembali: Yo, Julia.
Mna, uJulia Yiyo inoveli yembali ebekwe kuBukhosi baseRoma kunye Kudlala umfazi. Abasetyhini banqatshelwe indima yabo ebalulekileyo kwimbali yeli xesha linomdla kunye nomxholo wophando oluninzi kunye neenoveli, kwaye uSantiago Posteguillo ugxile kwinto enye Julia, umfazi thatha isigqibo ngekamva loBukhosi baseRoma.
Mna, uJulia, de USantiago Posteguillo, uphumelele Imbasa yePlanethi 2018 iya kukhutshwa ngo-Novemba ngo-6 ngephepha lokuqala lokuprinta lama-210.000.
2 Umbalisi webali obalaseleyo webali elikhetheke kakhulu
3 Umntu. Kutheni umfazi ebukumkanini baseRoma?
4 Abafazi abanamandla kunye nokuba ngumama.
Yo, uJulia uqala kwi nyaka 192, nini Amadoda amahlanu aphikisana nolawulo loBukhosi baseRoma. UJulia ngumfazi womnye wabo, kunye nezinto anomdla kuzo: ukuba uBukhosi baseRoma alawulwe bubukumkani bakhe. UJulia uza kuba ngumfanekiso othi, ukusuka kwizithunzi, alawule ikamva loBukhosi baseRoma.
Mna, Julia, andothusi kuphela amandla asetyenziswa ngumntu obhinqileyo kubukhosi baseRoma, kodwa nangenxa yokuba kukho ibali lothando. Ngumtshato wokuqala wobukhosi ngothando, kunye nezibonelelo zokungalunganga okucingelwa ngumnqweno ophakathi kwimbambano yezopolitiko enobunzima obufanayo.
Inye kuphela into engalawulwa nguJulia kukuba ukuba akaphumeleli, uya kuphulukana nayo yonke into. Olu xinzelelo lukhulu luyagcinwa kuyo yonke inoveli.
Umbalisi webali obalaseleyo webali elikhetheke kakhulu
Ibali likaJulia liyamxelela hayi ngaphezulu okanye ngaphantsi UGalen. Une iimfuno zabo Kukude kakhulu kwezopolitiko okanye ngubani olawula ubukhosi. Ekuphela kwento ebalulekileyo kuGalen yile bakwazi ukuhluza izidumbu zabantu, isenzo esingavumelekanga ngelo xesha eRoma.
Ngaxeshanye, uGalen udale uhlobo lwesitofu sokugonya ityhefu kwaye uJulia umbiza ukuba asebenzise olu nyango kumyeni wakhe. Uphuma kwiminqweno yakhe: izidumbu zabantu ezivavanywayo. Ngokutsho UGalen udibana noJulia, uvuka ukhule eyakho ukumncoma.
USantiago Posteguillo usibalisela ibali likaJulia, umfazi onamandla ogqibe ngekamva loBukhosi baseRoma.
Umntu. Kutheni umfazi ebukumkanini baseRoma?
E-Spain amabango endima yamakhosikazi maninzi kakhulu kunakwamanye amazwe. Esi ayisosizathu sokuba uSantiago Posteguillo akhethe uJulia, umfazi onamandla amakhulu kunye nendima ebalulekileyo kwimbali yoBukhosi baseRoma, njengomntu ophambili kwinoveli yakhe. I-Posteguillo ibheka abalinganiswa beembali ezifanelekileyo kwaye bancinci. Ixesha elingaphezulu kunye nokuncoma kwinoveli yembali ethatha amashumi eminyaka, aba bantu bathulisiweyo, abakufanelekeleyo ukubaluleka kwe-protagonism yeenoveli ezinkulu zembali, ngabafazi. Yile ndlela uPosteguillo afika ngayo ukuza kudibana noJulia.
Kwabafazi ukutsala imitya kwisithunzi apho bethotyelwe khona, kudala kusenzeka. Ngoku masiqale ukunika ilizwi kwezi Amanani amakhulu ezembali ukubaluleka kwawo kuthuliswe ngokungekho sikweni ngokuba ngabafazi.
Kuyo nayiphi na inoveli ebekwe kubukhosi baseRoma, iRoma ithatha ukubaluleka okugqitha abalinganiswa. Nangona kunjalo, amandla kaJulia makhulu kangangokuba, njengoko inoveli iqhubeka, umfundi uyalibala ngeRoma kwaye ucinga kuphela malunga nokuza kwenzeka kuYulia.
Xa umntu enamandla ayinakulinganiswa ngobuhlobo babo kuba abantu basondela kubo ngenxa yomdla. UAristotle sele etshilo ukuba le fomu umlinganiselo aba bantu ziintshaba zakhe. Iintshaba zikaJulia zibonisa ukubaluleka komlinganiswa ongokwembali: 5 Abalawuli baseRoma babeziintshaba zakhe eziphambili.
Abafazi abanamandla kunye nokuba ngumama.
UJulia unabantwana ababini. Umama wakhe unomdla kakhulu kuba yindlela yokugcina ubukhosi.
Oku kuphakamisa umbuzo wokuba injani le nkalo yobomi bakho. Kodwa
"Ngaba kulungile ukubuza ukuba uJulia wayengumama olungileyo?" UPosteguillo usixelela. «Ngaba umntu uyazibuza ukuba uNapoleon okanye uJulius Caesar babengabazali abalungileyo? UNapoleon wamshiya unyana wakhe eVienna, wakhula waba yindoda elusizi, ethiyiwe ngokuba ngunyana womntu angamaziyo. "
Nokuba uJulia ulungile okanye ungumama ombi akachaphazeli ukukhula kweli bali, Njengohlobo lukayise uNapoleon awayenalo xa ethetha ngoBukhosi baseFrance.
USantiago Posteguillo unesidanga kwi-English Philology kunye nembali yenoveli. Umnqweno wakhe bubukumkani baseRoma, ixesha apho abeka khona iinoveli zakhe. Ukungabi ngumbhali-mbali kumenza ukuba othuke enze iimpazamo zembali kwaye oko kumkhokelela ekubeni azibhale kakuhle kwinoveli nganye. Umbhali ngokwakhe usixelela ukuba njengoko umbhali wenoveli unayo inzuzo ababhali-mbali abangakonwabeliyo: inakho yenza iziqwenga zembali ezingaziwayo ukuze zilingane neziganeko zembali. Iziqwenga ezinamathuba aphezulu okuba yinyani, kodwa loo nto Iimbali-mlando azinakukhusela kuba azingqiniswanga ngokwenzululwazi.
Sijonge phambili ekwazini eli bali elithembisa ukonwabisa kunye nokufumanisa umlinganiswa wembali owayesazi ubumnyama kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » USantiago Posteguillo, ophumelele amabhaso ePlaneta 2018, utyhila iyelenqe likaYo, uJulia.